Waterproof duffel akpa Manufacturers & Suppliers - China Waterproof duffel bag Factory
N'èzí Travel Waterproof Duffel akpa
A multifunctional n'èzí njem akpa. Ihe PVC dị elu, nnukwu ikike nke 65 lita. Adabara a dịgasị iche iche nke ndapụta. Ma ị na-eme njem n’èzí, ọzụzụ na mpaghara volleyball, igwu mmiri na ebe igwu mmiri, ma ọ bụ na-arụ ọrụ mgbatị ahụ. Akpa a ga-abụ ezigbo onye inyeaka gị.
Nnukwu-ikike njem akpa customization
Onye njem gị, mara mma ma dịkwa mfe, pụọ nnọọ. Elu-elu waterproof TPU ihe onwunwe, na-eyi na-eguzogide ọgwụ na waterproof. 55L ohere nchekwa nchekwa buru ibu, ma ị na-ejegharị, ahụike, ma ọ bụ ọzụzụ dị mma. Ọ dị mfe ibu na mfe iji.
Omenala Duffel akpa Travel Fitness Ọzụzụ
Akpa mmiri na-enweghị mmiri na ihe 500D-PVC na ikike 70L buru ibu. Nwere ike iji ya na njem, ahụike, ọzụzụ, igwu mmiri na oge ndị ọzọ. Ọdịmma ya na nguzogide mmiri ga-ewetara gị oke ịtụnanya.